Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal विश्वकपमा छनाेट हुन नसकेपछि धरधरी राेए राेनाल्डाे, छनाेटकाे सम्भावना कति ? | Aafno Khabar
विश्वकपमा छनाेट हुन नसकेपछि धरधरी राेए राेनाल्डाे, छनाेटकाे सम्भावना कति ?
२०७८ कार्तिक २९ गते १२:४४ प्रकाशित
काठमाडौं । सर्बियासँग २–१ ले पराजित भएसँगै पोर्चुगल २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकपका लागि छनोट हुन सकेन । खेल हारेपछि रोनाल्डो मैदानमै बसेर धरधरी रोएका छन् । आफ्नै होम ग्राउण्डमा सर्बियासँग विश्वकप छनोटको समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नुअघि पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो देश विश्वकपमा छनोट हुने ग्यारेन्टी गरेका थिए ।
पोर्चुगल समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नुअघि समूहको शीर्ष स्थानमा थियो । यो खेल बराबरीमै रोकिएको भए पनि पोर्चुगल विश्वकपमा छनोट हुने थियो । तर, अन्तिम समयको गोलले पराजित भएपछि पोर्चुगल अब विश्वकप पुग्नको लागि प्ले अफ खेल्नुपर्ने भएको छ । अब पोर्चुगलसँग प्ले अफ जितेर मात्रै विश्वकपसम्म पुग्ने बाटो बाँकी छ ।
अब पोर्चुगलले विश्वकपमा छनोट हुनको लागि प्ले अफमा ४ देशहरुको समूहमा समूह विजेता बन्नुपर्नेछ । समूहमा शीर्ष स्थानमा रहन सकेमा मात्र पोर्चुगल विश्वकपमा छनोट हुन सक्नेछ । प्ले अफमा १२ युरोपेली देशहरु खेल्नेछन् । विश्वकप छनोटमा युरोपमा १० समूह थिए । त्यसबाट १० समूह विजेता सिधै विश्वकपमा छनोट हुन्छन् । दोस्रो हुने १० देशले अब प्ले अफ खेल्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक विश्वकपको प्ले अफमा युइएफए नेशन्स लिगबाट पनि २ देश थपिएर १२ देश हुनेछन् । प्ले अफमा यी १२ देशहरुलाई प्रत्येक समूहमा ४–४ देश रहने गरी ३ समूहमा विभाजन गरिनेछ । यी ३ समूहमा पर्ने देशहरुले एक अर्कासँग खेल्नेछन् र समूहको विजेता हुने देश विश्वकपको लागि छनोट हुनेछ ।